Spotify music free na Spotify 30 ụbọchị ikpe .
Na-ege ntị Spotify Music Free Na Spotify 30 Ụbọchị Ikpe
Part 1.How itinye Spotify 30 ụbọchị ikpe
Part 2.How na-ege ntị music free mgbe Spotify 30 ụbọchị ikpe
Download Spotify music free na TunesGo
N'ezie, otu n'ime ihe ndị kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ mgbe ọ na-abịa music ọ bụ ihe biakwa obibia eziokwu na Spotify mere ka n'aka na ahịa isi na-amụba na maka otu ihe e mere ya n'aka na adịchaghị na akaụntụ na-abụ abụ gbasie na-ekwe a 30 n'efu ụbọchị ikpe mgbe ha edebanye maka ọrụ iji hụ na ha mkpebi ike na-mezuo na enyemaka nke ọkaibe ọrụ. A nkuzi bụ ihe niile banyere edebanye maka free ikpe na mgbe Mmebi na-ege ntị music free.
1. Olee itinye Spotify 30 ụbọchị ikpe
Ọ bụ ọzọ otu nke kasị mma atụmatụ nke Spotify na-enye ohere ahịa na nke kacha mma na ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla hassle na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na e kwuru okwu ya na nkuzi na-abụghị nanị soro ma na-emejuputa atumatu na n'otu ụzọ ahụ na-enweghị awụgharị ihe ọ bụla na-eme ka n'aka na needful a mere n'ime kacha nta na o kwere omume oge. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-etinyere oge ọ bụla ọ na-edu ọ bụla ọzọ enyi na òtù ezinụlọ na-ọrụ dị ka otu àgwà nke Spotify bụ na ọ dịghị mgbe ha na-agbanwe ha Filiks ma na ọ bụrụgodị na ha ime mgbanwe ndị dị otú ahụ a obere ndị na onye ọrụ na-mgbe mezuo na nke a na ha na-kpuchie elu site na nkịtị nhazi na-etinye ọnụ. N'okpuru ebe kwuru bụ zuru ezu usoro iji nweta ọrụ dome na àgwà na klas:
1. The ikpe na peeji nke nke na ozi dị ga-enweta iji jide n'aka na usoro a triggered. The URL bụ www.spotify.com/freetrial/
2. The ojiji mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe ịrịba ama elu button na-kụrụ gaba ihe ọmụma page:
3. The Spotify akaụntụ bụ mgbe ahụ ka a ga-enweta:
4. The ojiji mgbe ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ugwo usoro họrọ ka kwa oke nke onye ọrụ ::
5. The ugwo bụ mgbe ahụ ka enen iji jide n'aka na ndị ọrụ na-akawanye a free nzọ ụkwụ nke ụbọchị 30. Ọ na-na-kwuru na n'agbanyeghị nke ịdenye na ugwo usoro ndị suer ga nyochawa-ebubo ihe ọ bụla na ikpeazụ ugwo anọgide efu:
2. Olee otú ige ntị music free mgbe Spotify 30 ụbọchị ikpe
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe atụmatụ mepụtara dị iche iche nyiwe na-esonụ bụ ihe ngwọta na nke a.
1. Iji na FB
Isi nzọụkwụ iji Spotify na nke a dị ka ndị a:
a. The FB akaụntụ bụ ite ke:
b. The homepage a na-ahụ na-pịrị:
c. Ojiji mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na site music taabụ Spotify na-ahọrọ:
d. The Spotify a na-ahụ na-kwukwara na FB na a okokụre usoro na zuru
2. Listen offline on iPhone
Ọ bụkwa otu nke kasị mma ọrụ na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Usoro bụ ka ndị a:
a. The Spotify ngwa bụ na-arụnyere site na nbudata ya:
b. The akaụntụ a na-ahụ na-ite ke:
c. The listi ọkpụkpọ a ga-tapped na enyemaka nke ekpe menu:
d. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na green button na-enwe ibudata playlist na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị mode na ọ na-okokụre usoro na zuru:
3.-anọghị n'ịntanetị mode na Android
Usoro bụ ka ndị a:
a. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na edit offline playlist họrọ mgbe android ngwa na ulo oru:
b. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na playlist na-synced bụ pịrị:
c. The offline mode na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na usoro-agwụ n'ebe a;
4. nbudata songs
Usoro dị mfe ma e kọwara dị ka n'okpuru:
a. A ụda edekọ na-arụ na-akawanye tracks dere bụ ike ibudata site ọ bụla website na-reputed na nke a:
b. The Spotify a na-ahụ ga-emeghe:
c. The ndekọ usoro a na-ahụ ga-emeghe:
d. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na song si ndepụta na-egwuri mere na usoro ihe omume nke na ndekọ na-amalite na-arụ ọrụ na ya dị ka ọtụtụ n'ime ha bụ onwe-akpali na-arụ ọrụ na nke kacha nta na nnyonye anya:
e. The songs ga-e dere na-akpaghị aka na a ga-ebudatara ka usoro enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na ọ na-eme ka n'aka na usoro-agwụ ebe a na àgwà:
5. Free desktọọpụ ahịa version
Onye ọrụ kwesịrị iji na-eso usoro dị ka n'okpuru na-kasị mma pụta nke a nke na ga-edu ha na-online na offline free Spotify:
a. The Spotify website bụ na-nleta:
b. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na akaụntụ na-kwalite:
c. Desktọọpụ ahịa a na-ahụ t ike ibudata iji jide n'aka na free music na-enwe:
Ozugbo free ikpe e okokụre onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na ahịa bụ uninstalled na reinstalled otu ugboro ọzọ na-arụ ọrụ mere na-eme ka n'aka na Spotify ụbọchị 30 free nzọ ụkwụ na-enwe m kasị mma na n'ụzọ. Spotify ka mgbe gbagote na revenue ọgbọ echiche ma dị ka ndị ọrụ na-enwe nchegbu ha ga-eme ka n'aka na ọzọ ụzọ na-mepụtara mere na free music na-enwe enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà Filiks na-rụrụ dị ka e kwuru n'elu na-bụrụ na nke ọ bụla ngwọju-anya ọbụla onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọkachamara ndụmọdụ na-na-achọ zere ihe ọ bụla nke kpamkpam.
Ebe Listen Music Videos Online on nrụọrụ
Olee otú dezie ID3 Tags akpaghị aka, na-agbanwe n'Ụzọ 'Information, duplicated Track
Download Soundcloud n'Ụzọ si Soundcloud
Olee otú Download Music ka Computer
Olee otú Download Music Songs
Top 50 Oge gboo Music
The Best 6 Audio Tag Editor Software E Nwere Taa
Otú nyefee Music ka Nexus 7
Aka-na FLV ka MP3 Ntụgharị wepụ MP3 si FLV
> Resource> Music> Gee Spotify Music Free Na Spotify 30 Ụbọchị Ikpe